Xikmo News » Talaaboyin Dabiici ah oo aad ku Daweeyn karto Findoobka Home
BREAKING NEWSHANTI-DHOWRKA: Sannadkan Waa Sannadkii la-dagaalanka Musuq-maasuqaBooliska Kenya oo qof Somali ah u qabtay dilka 64-qof oo ka dhacay ManderaMadaxweyne ku xigeenka Maamulka PL oo soo Dhaweeyay Kulanka MuqdishoSaraakiil ka tirsan DFS oo Sheegay inay Dagaallo ku dileen Xubno Shabaab ahKulan Muqdisho ku dhexmaray Madaxweynaha Somalia & Madaxda GobolladaMareykanka oo sheegay inuu beegsaday sarkaal sare oo Al-shabaab ka tirsanRa’iisul Wasaare Cumar oo kulammo la qaatay Xubno ka tirsan BaarlamaankaSarkaal ka tirsan mileteriga DF oo Muqdisho qarax lagula eegtayDowlada Federaalka oo xaqiijisey geerida sarkaal ka tirsan Al-shababSharma’arke oo Is-beddel ku sameynaya golihii wasiirrada ee uu Magacaabay	Talaaboyin Dabiici ah oo aad ku Daweeyn karto FindoobkaPosted On 16 Mar 2013By : Abdikarim MohamedComments: 3
findoobka ama finanka wajiga ka soo baxa qof walibaa sida uu yaqaano waxaa uu dhalinyaro badan oo hablo iyo wiilal ah ay ka cabanayaan dhibaatada fininka yar yar ee wajiga kasoo yaaca iyagoo kuu sheegaaya in ay ku qabaan murugo iy culeys badan ayna ku tala jiraan habeen iyo maalin la dagaalankooda.
Waxyaabaha keeni kara sida
Marka ay qaangaarayaan dhalinyaradu nooc ka mid ah hoormoonadooda jirku waxay bixiyaan wax u sababaya inay finan kasoo baxaan. Wuxuuna ku dhacaa kuwa qaan gaaraya kaliya.
Dadka waawayn waxaa u sababa dhaxal ay ka dhaxleen waalidkood.
Dumarka waxaa u sababa, hormoonaadkooda isbadalka ku dhacaya markasta
Daawadiisu waa maxay? Arimahan soo socda ayaa u noqon kara daawo:
Maalintii dhowr jeer ku dhaq wajigaaga biyo diirimaad ah iyo saabuun, hana ku xoqin wajiga.
Iska yaree cuntada dufanku kujiro.
Meka-upka dufanka lehi wuu sababi karaa ee ha isticmaalin.
Farmasiga waxaa laga heli karaa kareemo iyo saabuuno daweeya ama yareeya fiindoobka, hana iloobin inaad akhriso nidaamka loo marsado, noocyo kala duwan oo badana ha soo qaadan hal mar.
Finanku hadii ay aad u badanyihiin dhakhtar utag, sababtoo ah marmar ayey xaladaha qaarkood daawo u baahanyihiine
Siyaabaha Dabiiciga ah:
mari guud ahaan wajiga mudo 15 daqiiqo ah marki uu qalalo wajiga kaga dhaq biyo qabow.
caleenta geedka Talaalka caleenta cagaaran ee talaalka oo ah mid si aad ah ugu wanaagsan ka hor taga finanka iyo daweeyntooda, sidoo kale waxey aad ugu wanaagsan tahay haaraha, waxaana ka buuxa maadooyin ka hortaga caabuqa ay sababaan bakteriyada, waxeyna ka dhigtaa harga qofka mid jilicsan oo qabow.
isticmaal 1 qaando mugeed oo caleenta cagaaran ee talaalka ah.
mari isku darka wajigaada mudo 15 daqiiqo ah kadibna ka meeyro
Baradhada waxa ay aad ugu wanaagsan tahay nuugusta saliida badan mar hadii uu yahay haragaaga mid saliid badana waxa uu u nugul yahay in ay kasoo baxaan finan ama nabro badan oo uu sababay bakteeriya ka dhalata qoyaankaas, sidoo kale baradhada waxa ay la dagalantaa haaraha iyo mad madoobaadkaa indhaha hoostaada, joogteynteedana waxa ka heli doontaa natiijo wax ku ool leh.
waxaad jar jartaa baradhada adigoo shiidi kara kadibna biyaheeda mari dhamaan wajiga, sidoo kale cadad baradho ah ayad ku dul nabi kartaa ama saari kartaa meelaha mad madowga uu ku jiro wuuna kaa baabi’in donaa insha’alah.
isticmaal “steam” uumitada biyo kulul taas oo wajiga ka caawineeysa iney nadiifsamaan dul duleelada nabraha kana dhaqaajin doonta baktiiriyada iyo dhamaan haaraha iyo mad madowga wajigaada.
waxaan aad u rajeynayaa in fikradahani ay yihiin kuwa ku caawin dona isticmaalkooduna uu yahay mid sahlan.
About the Author	Previous StoryMaxaa kordhin kara jacaylka Qoyska ?Next StoryXabiibo Wehliye Xasan: ” wan u bareeray Qatar kasta oo jirta” Dhageyso wareysi an la yeelanay haweeney kaxeeysa Gaadiidka Dadweynaha
3 Comments	marwaan
Reply	Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu
wll diin ahaan ma banaantay in La marsadaa siiba inamada /dhalinyarta
Reply	Waa sifican waan kahelay taloyin kaada walaal
samiir mo saak
Reply	waan u bogay website kan
Visitors CounterVisits today: 21
Total page visits: 4458
Total Site Visitors: 34143